၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Free Speech Coalition သည် Prause အထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။ သူမသည်ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ကျားကန် 2015 (ညစ်ညမ်းကွန်ဒုံးများ) ကိုလက်ခံပြီးချက်ချင်းတိုက်ခိုက်သည် - Your Brain On Porn
နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးနှင့်အတူဟောင်းတစ်ဦးပညာသင်နှစ်ဖြစ်ပါသည် ရှည်လျားသောသမိုင်း စာရေးသူ၊ သုတေသီများ၊ ကုထုံးပညာရှင်များ၊ သတင်းထောက်များ၊ ပြန်လည်နာလန်ထူလာသည့်အမျိုးသားများ၊ ပညာသင်နှစ်ဂျာနယ်အယ်ဒီတာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများစွာနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးများကိုသက်သေပြရန်ရဲရင့်သူများကိုအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ သူမဖြစ်ပုံရသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယားကဤသို့ရှင်းပြသည် -“အ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved လူတွေအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုကိုပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါသည်မှ.").
သူမ၏အတွက် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဗြောင်ကျကျထောက်ခံမှု, Prause သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များရှိသည့်အနည်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက် ၂ ခုကိုဖန်တီးထားသည်။
2016 - PornHelps " ၎င်းတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တွစ်တာအကောင့် (@pornhelps) နှင့်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကိုအားပေးသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ညစ်ညမ်း၏ "အပြုသဘောဆောင်သော" အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအစီရင်ခံသည့်အပြင်လူကြည့်များသည့်လေ့လာမှုများရှိသည်။ “ PornHelps” သည်နာတာရှည်နှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်နာမည်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်များကို သုံး၍ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရသည့်တူညီသောလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုနာတာရှည် တကယ်တော့၊ Prause ဟာသူမရဲ့ထင်ရှားတဲ့ alias PornHelps နှင့်အတူတကွပူးပေါင်းပြီးတွစ်တာနှင့်အခြားနေရာများတွင်တစ်ခြားသူများကိုအခြားသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်တိုက်ခိုက်လိမ့်မည် (ကြည့်ပါ) 1, 2, 3, 4) ။ @pornhelps တွစ်တာအကောင့်နှင့် PornHelps ဝက်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုလုံးသည် Prause တုန်းကရုတ်တရက်ဖျက်ပစ်လိုက်သည် အပြင်မှာ စိတ်ပညာယနေ့တွင် PornHelps အဖြစ်။
2019 - ၏မန်နေဂျာအဖြစ်ချီးမွမ်း RealYBOP တွစ်တာ နှင့် RealYBOP ဝက်ဘ်ဆိုက်ထို့အပြင်အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုတို့တွင်ပါ ၀ င်နေသည် ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, Gabe NCOSE၊ Laila Mickelwait, GAIL ထမင်းစားခန်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအခြားမည်သူမဆို။ ဒါ့အပြင် David Ley နှင့်အခြား RealYBOP“ ကျွမ်းကျင်သူများ” လည်းပါ ၀ င်သည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်လိင်စွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္myာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများအားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ ချီးမြှင့်ခြင်း (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်တဲ့အရှင်သခင်) RealYBOP တွစ်တာ) ဖြစ်ပေါ်လာသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူတင်းကျပ်စွာနှင့်ရန် RealYBOP Twitter ကိုအသုံးပြုသည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, PornHub ကိုခုခံကာကွယ်ပါ (ကလေးညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများပါ ၀ င်သည်) နှင့် အသနားခံစာကိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါ ကျင်းပရန် PornHub တာဝန်ခံ။
Quid Pro Quo? ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏စည်းရုံးလှုပ်ရှား အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း သူမကကယ်လီဖိုးနီးယား၏ကျားကန် 60 (ညစ်ညမ်းကွန်ဒုံးများ) ကိုချက်ချင်းလက်ခံပြီးချက်ခြင်းတိုက်ခိုက်သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားအဆိုပြုချက် ၆၀ (၂၀၁၆ ရွေးကောက်ပွဲ) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များတွင်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုပြဌာန်းလိမ့်မည်။ ၎င်းကို AIDS Healthcare Foundation (AHF)၊ အကျိုးအမြတ်မယူသော HIV / AIDS စောင့်ရှောက်မှုနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကထောက်ပံ့ခဲ့ပြီး porn ထုတ်လုပ်သူများကစိတ် ၀ င်စားစွာဖြင့်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ စိတ်ဝင်စားမှုအရ Nicole Prause နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် David Ley ။
၂၀၁၆ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် Prause နှင့် Ley တို့သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်များစသည့်ပိုမိုကြီးမားသည့်ပြissuesနာများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘဲ Prop 2016 ကိုအနိုင်ယူရန်စိတ်စွဲလမ်းနေပုံရသည်။ Prause နှင့် Ley တို့နှစ် ဦး စလုံးသည် Prop 60 အတွက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုတွစ်တာရေးသားခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရေးသားခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည် အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်းအဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်, ဧည့်ခန်းလက်မောင်း (tweet1, tweet2, tweet3, tweet4, tweet5, tweet6, tweet7, tweet8, tweet9, tweet10, tweet11 - မှတ်ချက်။ ။ ယခုရေးသားမှုအားလုံးကို Prause ကဖျက်လိုက်သည်။
ဒီနေရာမှာအစစ်အမှန်နိုငျကငျြ့သူ Prause ခဲ့သည် သူမ၏ပထမဆုံးတွစ်တာအကောင့်ကိုအပြီးတိုင်ပိတ်ပင်ထား နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာ-နောက်ယောင်ခံသည်။ အစားအချက်အလက်များထုတ်ဖော်၏ (၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများချိုးဖောက်မှုမှာတော့တွစ်တာသူမ၏ဒုတိယတွစ်တာအကောင့်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ), Prause ယောဟနျသ Adler MD (စတန်းဖို့ဒ်) တစ်နည်းနည်းနဲ့သူမ၏တွစ်တာချွတ်ကန်တယ်တဲ့အရပ်ရှည်ရှည်-ပုံပြင်လုပ်ကြံ။ သူမသည်တွစ်တာမှနှင်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဘာမျှမဆိုင်ပါဘူး။ မုသာအပေါ်တည်ရှိသည် (John Adler သည်ဟီလ်တန်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်).
ထိုအချိန်မှစ၍ Prause သည် FSC ကိုအကြိမ်ကြိမ်လူသိရှင်ကြားကူညီခဲ့သည်၊ ဥပမာ FSC ၏ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံခဲ့သည် ကယ်လီဖိုးနီးယား၏မကျေနပ်ကြသောအဆိုပြုချက် ၆၀ (porn တွင်ကွန်ဒုံးကာကွယ်ရန်တောင်းဆိုခြင်း):
Smearing AIDS ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖောင်ဒေးရှင်းညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များဘက်မှကြည့်လျှင်
Prause Retweet XBIZ ဝါဒဖြန့်, တိုက်ခိုက်မှုများ AIDS ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖောင်ဒေးရှင်းporn တွင်ကွန်ဒုံးကာကွယ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသော (Prop 60) https://twitter.com/AIDSHealthcare
ညစ်ညမ်းသောလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့သည့်အနေဖြင့်၊ တိုက်ခိုက်မှုများကိုချီးမွမ်း AIDS ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဖောင်ဒေးရှင်း (က Prop 60 ကိုထောက်ပံ့သည်):
ညစ်ညမ်းဖျော်ဖြေသူများအတွက်ကွန်ဒုံးကာကွယ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသော UCLA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်အားတိုက်ခိုက်စဉ် FSC ကိုတံဆိပ်ကပ်ခြင်း (Prop 60)
အလွတ်? Prause ရဲ့ဒီဂရီစာရင်းဇယား၌တည်ရှိ၏နေစဉ်, Keren Landman MD တစ်ချိန်ကအမေရိကန်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသောသုတေသီတစ် ဦး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါပညာရှင်နှင့်ကူးစက်ရောဂါအထူးကုတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကူးစက်မှုသည်သူမအတွက်အထူးကျွမ်းကျင်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Prause သည်ကျွမ်းကျင်သောနေရာတစ်ခုမှကျွမ်းကျင်သူများကိုကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးသူမ၏ရာထူးကိုသက်သေအထောက်အထားများဖြင့်တစ်ပြိုင်တည်းပျက်ကွက်နေစဉ်။ (Prause ၏ပြောဆိုချက်ကိုမည်သူမဆိုယုံကြည်ပါသလား။တိုင်း လွတ်လပ်သောသိပ္ပံပညာရှင် "ကျားကန် 60 ဆန့်ကျင်?) မည်သူမဆိုကျားကန် 60 ဒေါက်တာ Landman ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ဘာပဲ အနေအထားထောက်ခံနေသည် သုတေသနအသုံးပြုပုံနှင့်နီကိုးလ် Prause ရဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
Prause သည် Gary Wilson အားတွစ်တာတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အရာဖြစ်ပြီး Prop 60 ကိုအနိုင်ယူရာတွင်သူ၏အခန်းကဏ္ about နှင့် ပတ်သက်၍ ကြွားဝါသည်။ သူမ၏ယူဆအမည်ရှိ RealYBOP Wilson ၏တွစ်တာများကိုမကြာခဏလှည့်စားလေ့ရှိသည် - Wilson ကအကောင့်နှစ်ခုလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားသော်လည်း